5 रात गाडिहरु सवारी युरोप मा कारण | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5रात गाडिहरु सवारी युरोप मा कारण
हुनत युरोपेली रातारात ताजा स्थिति रेल एक लोपुन्मुख जाती को कुरा हुँदै गइरहेका छन् (बजेट एयरलाइन्स हामी तपाईंलाई देख रहे!), रेल प्रेमीहरूको अझै पनि दिने छैन! को उत्साही रेल प्रेमीहरूको लागि, केही रात रेल सवार hopping र को सौन्दर्य आनंद धड्किन्छ लामो दूरी बैंक तोड्न बिना आफ्नो अन्तिम गन्तव्य प्राप्त गर्न.
तपाईं विदेश एक रात रेल यात्रा योजना गर्नुभएको छ भने गरिएको तर निश्चित हो कि रात रेल सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो, तलको पढ्न गर्छन्.
नोट: हामी सँगै राख्नुभएको कारण सबै "स्टार्टर्स लागि बाहिर जाओ, तपाईं खर्च छैन 10+ घण्टा आफ्नो काँध मा drooling आफ्नो टाउको रेल विन्डो विरुद्ध jiggles रूपमा ".
रात गाडिहरु लागत-प्रभावकारी हुनुहुन्छ
बजेट हरेक यात्री लागि (वा ती बरु तिनीहरूले एउटा टिकट मा हुनेछ भन्दा राम्रो पकवान र पर्यटन थप खर्च चाहन्छु जो), रात रेल लागि रोज्न गर्न सबैभन्दा बजेट-मैत्री विकल्प हो (विशेष गरी एक विस्तारित यात्राको लागि). तपाईं अपेक्षा आधा तपाईं होटल मा तीन वा चार रात प्रतिस्थापन गर्दा काट्न आफ्नो खर्च (पनि एक सस्ता श्रेणी मा) एक रेल मा रात को नै नम्बर, बारेमा अप सुरक्षित $500! यदि त्यो स्मार्ट बजेट छैन, हामी के हो थाहा छैन!
रात गाडिहरु समय क्षमता & सुविधा
रेल यात्रा को प्रभावकारिता अकाट्य छ! युरोपेली रेल छिटो हो, संगठित र तपाईं कुनै कुरा तपाईं यदि यातायात विकल्प खोजिरहेको सबै इटाली जस्तै नजिक कतै यात्रा वा थप गन्तव्य. रेल द्वारा यात्रा सबैलाई भ्रमण कार्यालयमा लाइन मा पहिलो हुन देख गर्नुपर्छ जसले लागि शानदार छ, आफ्नो मनपर्ने संग्रहालय वा कहीं तिनीहरूले जाने योजना बनाएका चाहन्छु. रात रेल तपाईं वास्तवमा रात समयमा केही बाँकी प्राप्त गर्न विकल्प दिन. त्यसपछि विन्डो मार्फत र रेल स्टपहरू समयमा भव्य sceneries आनन्द गर्न दिन प्रयोग.
मिलान गाडिहरु गर्न Reggio कालाब्रिआ
बस नियमित रेल जस्तै, रात रेल हाम्रो ग्रह लागि सबै भन्दा राम्रो परिभ्रमण विकल्प हो. तिनीहरूले प्रति यात्री टाढा कम CO2 विमानहरु भन्दा उत्पादन देखि, तिनीहरू हुन सक्छ भविष्यको यातायात. त्यसैले, यदी तिमी वातावरण सचेत, तपाईं कुन तरिकामा तपाईं अब देखि यात्रा गरिने थाहा.
नाइस गाडिहरु गर्न Levanto
लास्पेजीया नाइस गाडिहरु गर्न
नाइस गाडिहरु गर्न नेपल्स
रोम नाइस गाडिहरु गर्न
रात गाडिहरु मित्र बनाउने लागि ठूलो हो
यदी तिमी एक्लै यात्रा, रेल तपाईं युरोप वरिपरि मानिसहरूको धेरै पूरा गर्ने मौका दिइरहेका छन्, एक अर्को सबै फरक. कुरा केही समान चासो फेला, र तपाईं संभावित जीवनको लागि मित्र गर्नुभयो! प्लस, के पनि अधिक महत्त्वपूर्ण यस वरिपरि समय (विषय लागि कम से कम हामी हुनुहुन्छ), तपाईं सुरक्षित फेला गर्नुभएको, विश्वसनीय मान्छे संग आफ्नो सुत्ने सानो घर साझेदारी गर्न! रात रेल अद्भुत छन्, तर नकारात्मक तपाईं जो निद्रामा घुर्नु मान्छे को एक गुच्छा संग बूथ मा अन्त्य छ, झगडा (माफ गर्नुहोस्!) वा ... केवल धेरै खोकी. त्यसैले, एउटै cramped खण्ड मा एक च्याट र केही रातका लागि ठूलो भन्ने एक समूह फेला शानदार छ!
को दर्शनीय अपील
वाह, हामी कल रातका ट्रेनहरूको सदाका लागि प्रेरणादायक लाभ समावेश गर्न बिर्सिसकेका छौं – सुंदर पुनरावेदन! Fjords मार्फत सो छैन, आल्प्स, र अन्य यस्तै सुन्दर sceneries. तर जागा रहन बाध्य महसुस छैन तपाईं जर्मनीको औद्योगिक heartland पारित रूपमा, या त. ओह, र - फोटो लिनुहोस्, यो केवल विन्डो मार्फत छ भने पनि!
हामीलाई tweeting हामीलाई थाहा दिनुहोस् @SaveATrain! , तपाईं तल हाम्रो अन्य सामाजिक च्यानलहरू पाउन सक्नुहुन्छ सुरक्षित-एक-ट्रेन र पाठ्यक्रम, तपाईं हामीलाई बाट आदेश गर्न सक्छ रेल टिकट.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-reasons-night-trains%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#रात #trainlovers रेल रेल यात्रा travelgermany यात्रा traveltips